အလုပ်သစ် ဝင်လို့ ချုပ်ရတဲ့ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် (EC)ထဲမှာ ဘယ်အချက်တွေ မဖြစ်မနေ ပါရမလဲ? - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ… (အစိုးရ ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ )အလုပ်သစ် စဝင်ပြီဆိုရင် မဖြစ်မနေ ကြုံရတဲ့ ကိစ္စက အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုရတာပါပဲ။ ဒီလို စာချုပ်ချုပ်ကြပြီဟေ့ဆိုရင်လည်း တော်တော်များများက ရှေ့ကစာတွေကို သာမန်ကာ လျှံကာ ဖတ်ပြီး လက်မှတ်ထိုးရမယ့်နေရာမှာ ကောက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဟော.. ဖတ်ပြန်တော့လည်း စာရွက်တွေက အထပ်လိုက်ကြီးဆိုတော့ ဘာတွေကို အဓိကထား ဖတ်ရမယ်မှန်းမသိဘူး ဖြစ်ပြန်ရော.. ဖတ်တော့ ဖတ်လိုက်ပါရဲ့၊ ဘာတွေရေးထားမှန်းမသိဘူးဆိုတာမျိုးကလည်း ရှိတတ်သေးတာ မဟုတ်လား.. ဒီတော့ အက်ဒ်မင်က ဒီ အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်ထဲမှာ ဘာတွေ မဖြစ်မနေ ပါရမယ်၊ ဘာတွေကို ကြည့်ရမယ် ဆိုတာလေး ယောင်းတို့ကို မျှဝေပေးပါ့မယ်…
ပထမဆုံး အရေးကြီးတာက အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ အလုပ်စဝင်ပြီး တစ်လအတွင်း (ရက် ၃၀ အတွင်း) စာချုပ်ချုပ်ဆိုရပါတယ်။ ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးကို သွားပြီး စာချုပ်ကို အတည်ပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်..
နောက်ပြီး စာချုပ်ဆိုတာက တစ်ဖက်တည်း ချုပ်ဆိုလို့ ရတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ.. အလုပ်ရှင် ဘက်ကရော၊ ဝန်ထမ်းဘက်ကပါ ညှိနှိုင်းစရာတွေ ရှိတာ ညှိနှိုင်းပြီး သေချာသဘောတူပြီဆိုမှ စာချုပ်ကို စပြီး အသက်သွင်းရတာပေါ့.. ကဲ.. ဒါဆို ဒီစာချုပ်ထဲမှာ ဘယ်အချက်တွေက မဖြစ်မနေပါရမလဲ?
(၁) အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား
(၃) လုပ်ခလစာ (အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်းဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လစာ ရဲ့ ၅၀% အောက် မနည်းတဲ့ လစာကို မဖြစ်မနေ ရရမှာပါနော်..)
(၄) လုပ်ငန်းခွင် နေရာ
(၅) အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကြား သဘောတူညီမှုများ (ကိုယ် ဘာတောင်းဆိုထားလဲ၊ သူ ဘာပေးမှာလဲ က ရှင်းအောင် ပြောပြီး စာချုပ်ထဲ ရေးထားဖို့ လိုပါတယ်)
(၆) အလုပ်ချိန် (တစ်ရက်ကို ၈ နာရီ၊ တစ်ပတ်ကို ၄၄ နာရီထက် မကျော်သော)
(၇) ပိတ်ရက်၊ ခွင့်ရက်များ
(၈) အချိန်ပို (နှစ်ဘက်လုံး သဘောတူမှသာ ခိုင်းခွင့်ရှိတာပါနော်.. မဟုတ်ရင် အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းမှုနဲ့ ငြိနိုင်တာမို့ ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါ။ ဒါကြောင့် နှစ်ဘက်လုံး ထောင့်စေ့အောင် ညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူမှသာ စာချုပ်ချုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။)
(၉) ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု
(၁၀) ဝန်ထမ်းဘက်မှ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ
(၁၁) အလုပ်ထွက်ခြင်း (ဥပမာ – အလုပ်ထွက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်နှစ်ရက်၊ ဘယ်နှစ်လ ကြိုတင် ပြောထားရမလဲ? အလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ရော အချိန်ဘယ်လောက်ကြိုပြီး ပြောထားဖို့လိုလဲ? )
စသဖြင့် အချက်တွေဟာ မဖြစ်မနေပါကို ပါရမယ့် အချက်တွေပါ။ တခြားအချက်တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်.. တကယ့်တကယ် တည်ဆဲဥပဒေအရဆို စာချုပ်ထဲ ပါရမယ့် အချက်က ၂၁ ချက် ရှိပါတယ်။ အက်ဒ်မင်က အရေးကြီးတာလေးတွေ၊ ယောင်းတို့ အဓိကထား ကြည့်ရမယ့် အချက်လေးတွေပဲ ရွေးပြီးပြောပြထားတာပါ။
သြော်… တကယ်လို့များ Training တစ်ခုခု တက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း training အပြီး အလုပ် ဆက်ဆင်းရမှာလား၊ ဆက်မဆင်းရဘူးလားဆိုတာကလည်း စာချုပ်ထဲ ထည့်ဖို့ လိုပါသေးတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ဒီစာချုပ်တွေဟာ အလုပ်ရှင် – အလုပ်သမားကြား အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နစ်နာမှု မရှိအောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ စာချုပ်တွေပါ။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှ အခွင့်အရေးယူ၊ ခေါင်းပုံဖြတ်လို့ မရအောင် စာချုပ်ထဲမှာ ပြည့်စုံအောင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုထားဖို့ လိုတာပါ။
စာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီဆို စာချုပ်ကို ရော့.. အင့်ဆိုပြီး ပြန်မပေးထားခဲ့ပါနဲ့။ မိတ္တူလေး ယူထားပါ။ မိတ္တူမပေးဘူးဆိုရင် ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ စာချုပ်ကို ဓာတ်ပုံဖြစ်ဖြစ် ရိုက်လာခဲ့ပါ။ ဒါမှ တစ်ခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘက်က သက်သေအခိုင်အမာ ရှိပြီး မနစ်နာမှာပေါ့…
ဒီလောက်ဆို ယောင်းတို့လည်း စာချုပ်တွေ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သတိထားမိသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်… နောက်များမှ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့…
“ဘာမှနျးမသိပါဘူး.. စာခြုပျလာပေးတာနဲ့ လကျမှတျထိုးပေးလိုကျတာပဲ” ဆိုတာမြိုး မလုပျလာသငျ့ပါနျော..
ယောငျးတို့ရေ… (အစိုးရ ဝနျထမျးမဟုတျတဲ့ )အလုပျသဈ စဝငျပွီဆိုရငျ မဖွဈမနေ ကွုံရတဲ့ ကိစ်စက အလုပျခနျ့ထားမှု စာခြုပျခြုပျဆိုရတာပါပဲ။ ဒီလို စာခြုပျခြုပျကွပွီဟဆေို့ရငျလညျး တျောတျောမြားမြားက ရှကေ့စာတှကေို သာမနျကာ လြှံကာ ဖတျပွီး လကျမှတျထိုးရမယျ့နရောမှာ ကောကျပွီး လကျမှတျထိုးလိုကျတာမြိုး လုပျတတျကွပါတယျ။ ဟော.. ဖတျပွနျတော့လညျး စာရှကျတှကေ အထပျလိုကျကွီးဆိုတော့ ဘာတှကေို အဓိကထား ဖတျရမယျမှနျးမသိဘူး ဖွဈပွနျရော.. ဖတျတော့ ဖတျလိုကျပါရဲ့၊ ဘာတှရေေးထားမှနျးမသိဘူးဆိုတာမြိုးကလညျး ရှိတတျသေးတာ မဟုတျလား.. ဒီတော့ အကျဒျမငျက ဒီ အလုပျခနျ့ထားမှု စာခြုပျထဲမှာ ဘာတှေ မဖွဈမနေ ပါရမယျ၊ ဘာတှကေို ကွညျ့ရမယျ ဆိုတာလေး ယောငျးတို့ကို မြှဝပေေးပါ့မယျ…
ပထမဆုံး အရေးကွီးတာက အလုပျခနျ့လိုကျပွီဟဆေို့တာနဲ့ အလုပျစဝငျပွီး တဈလအတှငျး (ရကျ ၃၀ အတှငျး) စာခြုပျခြုပျဆိုရပါတယျ။ ခြုပျဆိုပွီးတဲ့နောကျမှာလညျး သကျဆိုငျရာ အလုပျသမားရုံးကို သှားပွီး စာခြုပျကို အတညျပွုဖို့ လိုအပျပါတယျနျော..
နောကျပွီး စာခြုပျဆိုတာက တဈဖကျတညျး ခြုပျဆိုလို့ ရတဲ့ အမြိုးမဟုတျဘူးလေ.. အလုပျရှငျ ဘကျကရော၊ ဝနျထမျးဘကျကပါ ညှိနှိုငျးစရာတှေ ရှိတာ ညှိနှိုငျးပွီး သခြောသဘောတူပွီဆိုမှ စာခြုပျကို စပွီး အသကျသှငျးရတာပေါ့.. ကဲ.. ဒါဆို ဒီစာခြုပျထဲမှာ ဘယျအခကျြတှကေ မဖွဈမနပေါရမလဲ?
(၁) အလုပျအကိုငျ အမြိုးအစား
(၃) လုပျခလစာ (အစမျးခနျ့ဝနျထမျးဆိုရငျ သတျမှတျထားတဲ့ လစာ ရဲ့ ၅၀% အောကျ မနညျးတဲ့ လစာကို မဖွဈမနေ ရရမှာပါနျော..)
(၄) လုပျငနျးခှငျ နရော
(၅) အလုပျရှငျ၊ အလုပျသမားကွား သဘောတူညီမှုမြား (ကိုယျ ဘာတောငျးဆိုထားလဲ၊ သူ ဘာပေးမှာလဲ က ရှငျးအောငျ ပွောပွီး စာခြုပျထဲ ရေးထားဖို့ လိုပါတယျ)
(၆) အလုပျခြိနျ (တဈရကျကို ၈ နာရီ၊ တဈပတျကို ၄၄ နာရီထကျ မကြျောသော)
(၇) ပိတျရကျ၊ ခှငျ့ရကျမြား
(၈) အခြိနျပို (နှဈဘကျလုံး သဘောတူမှသာ ခိုငျးခှငျ့ရှိတာပါနျော.. မဟုတျရငျ အဓမ်မအလုပျစခေိုငျးမှုနဲ့ ငွိနိုငျတာမို့ ဒါဟာ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြပါ။ ဒါကွောငျ့ နှဈဘကျလုံး ထောငျ့စအေ့ောငျ ညှိနှိုငျးပွီး သဘောတူမှသာ စာခြုပျခြုပျတာ အကောငျးဆုံးပါ။)
(၉) ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု
(၁၀) ဝနျထမျးဘကျမှ လိုကျနာရမညျ့ စညျးကမျးမြား
(၁၁) အလုပျထှကျခွငျး (ဥပမာ – အလုပျထှကျမယျဆိုရငျ ဘယျနှဈရကျ၊ ဘယျနှဈလ ကွိုတငျ ပွောထားရမလဲ? အလုပျထုတျမယျဆိုရငျရော အခြိနျဘယျလောကျကွိုပွီး ပွောထားဖို့လိုလဲ? )
စသဖွငျ့ အခကျြတှဟော မဖွဈမနပေါကို ပါရမယျ့ အခကျြတှပေါ။ တခွားအခကျြတှလေညျး အမြားကွီးရှိပါသေးတယျနျော.. တကယျ့တကယျ တညျဆဲဥပဒေ အရဆို စာခြုပျထဲ ပါရမယျ့ အခကျြက ၂၁ ခကျြ ရှိပါတယျ။ အကျဒျမငျက အရေးကွီးတာလေးတှပေဲ ရှေးပွီးပွောပွထားတာပါ။
သွျော… တကယျလို့မြား Training တဈခုခု တကျရမယျဆိုရငျလညျး training အပွီး အလုပျ ဆကျဆငျးရမှာလား၊ ဆကျမဆငျးရဘူးလားဆိုတာကလညျး စာခြုပျထဲ ထညျ့ဖို့ လိုပါသေးတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ဒီစာခြုပျတှဟော အလုပျရှငျ – အလုပျသမားကွား အငွငျးပှားမှုတှေ ဖွဈလာတဲ့အခါ နှဈဦးနှဈဖကျ နဈနာမှု မရှိအောငျ ဖနျတီးပေးထားတဲ့ စာခြုပျတှပေါ။ ဘယျသူ့ဘယျသူကမှ အခှငျ့အရေးယူ၊ ခေါငျးပုံဖွတျလို့ မရအောငျ စာခြုပျထဲမှာ ပွညျ့စုံအောငျ ထညျ့သှငျး ခြုပျဆိုထားဖို့ လိုတာပါ။
စာခြုပျခြုပျပွီးပွီဆို စာခြုပျကို ရော့.. အငျ့ဆိုပွီး ပွနျမပေးထားခဲ့ပါနဲ့။ မိတ်တူလေး ယူထားပါ။ မိတ်တူမပေးဘူးဆိုရငျ ဖုနျးကငျမရာလေးနဲ့ စာခြုပျကို ဓာတျပုံဖွဈဖွဈ ရိုကျလာခဲ့ပါ။ ဒါမှ တဈခုခု ဖွဈလာခဲ့ရငျ ကိုယျ့ဘကျက သကျသအေခိုငျအမာ ရှိပွီး မနဈနာမှာပေါ့…
ဒီလောကျဆို ယောငျးတို့လညျး စာခြုပျတှေ ဘယျလောကျ အရေးကွီးတယျဆိုတာ သတိထားမိသှားလောကျပွီ ထငျပါတယျနျော.. နောကျမြားမှ ပွနျဆုံကွတာပေါ့…
Tags: Career, Contract, Employee, Employer, facts, Knowledge
ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်ကို အကျိုးရှိစေမယ့် ပွဲ(၃)ပွဲ